VALVe waxay u fureysaa bulshada GNU / Linux waxayna soo bandhigeysaa Beta | Laga soo bilaabo Linux
Waalka, shirkadda gadaal Steam ayaa furtay bulshada u heellan dadka isticmaala Penguin OS.
Bulshadan waxaad ka ogaan kartaa wararka ugu dambeeya, ka faalloon kartaa barxadda, la sheekaysan kartaa ama soo dejin kartaa fiidiyowyo iyo shaashado.
Marka laga soo tago Beta xiran Horaa loo sii daayay waxaana ka mid ah:
El macmiil ka Steam
Ciyaar ka mid ah Waalka
Taageerid Ubuntu 12.04 ama ka sareeya
Waxaad ka akhrisan kartaa macluumaad dheeraad ah http://blogs.valvesoftware.com/linux/beta-late-than-never-3
Kuwa naga mid ah ee isticmaala hargabka kale (sida kiiskeyga Arch Linux) waa inay sugaan, in kasta oo mid ka mid ah mawduucyada furan ee ka dhex muuqda golaha bulshada (oo waqtiga qorista maqaalkani ku dhow yahay 3000 xubnood) halkaasoo mid ka mid ah la bilaabay su'aasha caadiga ah ee distoorku adeegsado mid kasta, waxaa jira dad badan oo isticmaala oo dhaha waxay isticmaalaan distro kale sida Arch ama Mint, taas oo sameysa laakiin waxay kordhineysaa fidinta ay VALVe ku taageerto diro badan.
Ma ogid, laakiin waxaan horeyba u rajeynayaa Beta-da dadweynaha inay u soo baxaan inay ku rakibaan dalkayga '
Bulshada waxaa laga heli karaa http://steamcommunity.com/games/221410 waad iga heli kartaa sida cabdi_jareere.
Kuu arko Steam ^^
La cusboonaysiiyay: Hadda waa suurtagal in la qoro Beta. Kaliya waa inaad tan tagtaa bogga.
Kaliya waa inaad gasho Steam oo aad buuxisid xogta la codsaday, sida qeybinta, sawirada, cpu, RAM, iwm.
Waxaad dhahdaa waa nidaam xulitaan, markaa haddii nala doorto waxay nagu soo wargelin doonaan koontadayada. Haddii adeege soo galo, u qaado si fudud inaan dib u eegis ku sameyn doono 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » VALVe waxay u fureysaa Bulshada GNU / Linux waxayna bilaabeysaa Beta xiran
Waxyaabaha ayaa ah… taageerada Ubuntu 12.10? Waxaan u maleynayaa inay khalad sameeyaan iyaga oo aan taageero u fidin Ubuntu 12.04 maadaama ay tani tahay LTS
Bogga loo yaqaan 'Valve blog' wuxuu si cad u sheegayaa
* Taageerada Ubuntu 12.04 iyo wixii ka sareeya
Waraaq warqad ah markii la turjumayo 😛
Waxay ahayd warqad kayga ah si aan u taageero 12.10 iyo halkii aan ka taageeri lahaa 10.04.
Ka sokow waxaan hadda cusbooneysiiyay maqaalka
Waan kugu raacsanahay nano…. haddii aad isticmaaleyso Ubuntu ugu yaraan geli LTS taas oo ah waxa ugu macquulsan.
Taageerada ubuntu 12.010 ama ka sareeya?
Taageerada ugu horreysa ee Ubuntu waxay ahayd mid la filaayey maadaama ay tahay tan ugu badan ee la isticmaalo. Waxa aanan fahmin waa sababta ay u isticmaalaan nooca 12.10 oo aysan u isticmaalin 12.04 ...
Diiwaangelinta dadweynaha Beta way furan tahay ilaa xalay, qof kastaa wuu iska diiwaan gelin karaa, waa inaad buuxisaa oo keliya su'aalo ku saabsan qaybaha qalabka aan adeegsan doonno, qaybintayada, jawiga garaafka, nooca kontoroolayaasha aan doorbidno ( mid gaar ah ama mid bilaash ah) iyo inta aan isticmaaleynay GNU / Linux
Valve wuxuu yiri: Kaliya tijaabiyaasha 1K ee Steam ee Linux Beta-Version imtixaanka. Marka hore noqo !!!
Halkan waxaad ku leedahay boostada, waxaan u maleynayaa inay taasi u qalanto galitaan, dadka aan maqal.
Waa guul u soo hoyatay Linux.
Waxaan kaaga tagayaa boostada rasmiga ah:
Arch Linux: Tilmaamaha rakibidda aasaasiga ah.